Izindatshana zikaNatasa Djukanovic Martech Zone |
Imibhalo nge Natasa Djukanovic
Isazi sezomnotho ngemfundo, uNatasa Djukanovic ungumqondisi wezokuthengisa nokumaketha ka Isizinda.ME, inkampani yezobuchwepheshe yomhlaba wonke esebenza isizinda se-inthanethi ".ME." Uchithe wonke umsebenzi wakhe empambanweni yasebhange, imithombo yezokuxhumana, ubuholi kanye nobuchwepheshe, futhi uhlala ezama ukuthola imfihlo yokuba sezindaweni ezintathu ezihlukene ngasikhathi sinye.
Ungabuyisa Kanjani Ibhizinisi Lakho Ngaphandle Kokulahlekelwa Ithrafikhi
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 16, i-2016 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 16, i-2016 Natasa Djukanovic
Aziziningi izinkampani ezinakho konke okucacile ngesikhathi bethula iwebhusayithi yabo. Ngokuphambene nalokho, cishe ama-50% amabhizinisi amancane awanayo ngisho newebhusayithi, ingasaphathwa eyomfanekiso womkhiqizo abafuna ukuwuthuthukisa. Izindaba ezimnandi ukuthi akudingeki ukuthi ube nakho konke ukuze kutholakale ngqo kusuka kululwane. Lapho usaqala, into ebaluleke kakhulu yilokho - ukuqala. Uhlala unesikhathi sokwenza